Ma Wiki ahaan Dimuquraadiyad Sida aad Moodid? - Fikradda xirfadeed
Daraasado kala duwan ayaa muujiyey in qaybo ka mid ah tifaftireyaasha ay mas'uul ka yihiin daabacaadda iyo samaynta boggaga kala duwan ee Wikipedia. Oliver King, khabiirka Sare khabiir ku ah, wuxuu aaminsan yahay in ay tahay ammaan in la yidhaahdo Wikipedia waa kan ugu caansan internetka oo bilaash ah. Sorin Adam Matei, oo ah borofisar ka ah Brian Lamb School ee Isgaadhsiinta Jaamacadda Purdue, ayaa iskaashi la sameeyay Brian Britt, cilmi-baare iyo caawiye ku-xigeenka war-isgaarsiinta iyo joornaalka Jaamicadda Gobolka South Dakota wuxuuna sharaxay cidda ku siinaysa qoraallo waaweyn oo ku qoran Wikipedia.
Waxay si guul leh u heleen dhammaan qodobada Wikipedia oo waxay isku dayeen in ay u turjumaan luuqado kala duwan, laga bilaabo 2001 ilaa 2010 - hats for melbourne cup. Qorayaasha iyo tifaftirayaasha ugu fiican ayaa loo doortaa qoraallada Wikipedia, kaliya tafafiilayaasha khibraduhu waxay daabici karaan nuxurkiisa.
Matei waxay sheegaysaa waxa ay arkeen oo ay arkeen waa in hoggaanka cad ee dhowaan soo baxay. Waxay leeyihiin koox qorayaal iyo tifaftirayaal ah oo mas'uul ka ah samaynta maadada oo ay si adag u shaqeeyaan saacadaha si ay u soo daabacaan tayada iyo tayada dhabta ah ee Wiki. Tafatirayaashani waxay qaabeeyaan ajandaha, waxayna u hoggaansamaan dareenka masuuliyada, sida dhaqdhaqaaqyada diinta iyo siyaasadda.
Khabiirka ayaa sidoo kale sheeganaya in tifaftirayaasha ugu sarreeya iyo qorayaasha ee Wikipedia ay mas'uul ka yihiin abuurista boqolaal boqolkiiba articles. Qiyaastaasi waxay ahayd mid joogto ah, tifaftireyaasha iyo abuurayaashu waxay bedeleen istraatijiyadooda wakhti.
Wakhtiga la joogo, waxaa jira qof hoggaamiya kooxda tifaftirayaasha. Fikradda ah in ay qaabaynayaan waxa ay dadku ogaadaan waxay siinaysaa dareenka guulaha. Britt iyo Matei waxay qoreen buug cusub oo lagu magacaabo "Difaaca Dhisidda" ee Warbaahinta Bulshada: Adhikadaha iyo Entropy. Buuggani wuxuu iftiimiyay sida shabakadda shabakadu u noqotey shabakada internetka iyo kumbuyuutarka dhabta ah ee internetka.
Macaamiisha iyo khubarada ayaa soo saaray, laakiin qaar baa ka khibrad badan kuwa kale. Qaar ka mid ah cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in Wikipedia uu yahay websaydh qaab-dhismeedka bini'aadamka ah oo raacaya waddada evolutionary. Laga soo bilaabo ganacsiga fudud ee tooska ah ee loogu talagalay xafiisyada, qof walbuu ku xidhan yahay Wikipedia maxaa yeelay waa ilaha macluumaadka ugu fiican ee internetka.
Buuggan Britt wuxuu soo bandhigay natiijooyin kala duwan oo faa'iido leh oo faa'iido leh oo ku saabsan sida curyaamiinta cusubi ay uga soo baxaan adduunka isgaadhsiinta. Waxa kale oo uu sharxayaa sida ay kooxaha warbaahinta bulshada u kobceen waqti ka dib.
Adhokurku waa meel gaar ah, sida Wikipedia, iyo nidaamka ururku wuxuu ku dhisan yahay. Wuxuu isku daraa hoganka xasilooni iyo awood leh ee dhaqdhaqaaqa shakhsi ahaaneed. Wikipedia waxaa ku jira macluumaad ballaadhan, maqaalo, iyo luuqado kala duwan, tifaftirayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay abuuraan maqaallo maqan oo ku saabsan buuggan weyn ee weyn. Waa ammaan in la yidhaahdo Wikipedia waxaa ku jira in ka badan saddex boqol oo luqadood, laakiin badankoodu waa kuwo aan dhammeystirnayn oo yar. Dadka ka socda adduunka oo dhan waxay booqdaan Wikipedia maalin kasta waxayna akhriyaan in ka badan 300 oo qoraal ah.
Qaar ka mid ah waxay raadiyaan maqaallo qaas ah oo ay ku qoran yihiin boqolaal kun oo qorayaasha mutadawiciinta ah kuwaas oo ka masuulka ah dhismaha iyo ilaalinta casharkan caan ah oo bilaash ah. Qeybaha soo-galootiga badanaa waxay raadiyaan maqaalada ku qoran luuqada Ingiriisiga, iyo luqadaha kale waxay ku qoreen Wikipedia 30 milyan oo galaan ah.